शुल्क फिर्ताको माग गर्दै युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सीमामा एसएसबीको ज्यादती, ९ वर्षदेखि हर्कबहादुर कहाँ छन् ?
भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा गोली हानी बेपत्ता पारिएका नेपालीको अवस्था अझै गोप्य
कार्तिक २५, २०७६ ठाकुरसिंह थारु, कमल पन्थी
बर्दिया — टिनले छाएको घर नौ वर्षदेखि आफ्नो मालिक फर्किने प्रतिक्षामा छ । परिवारका सदस्य पनि उस्तै बेचैन छन् । पुरानो घाउ कोट्याउन चाहँदैनन् उनीहरू । बढैयाताल गाउँपालिका-१, शान्तिपुरका हर्कबहादुर शाहीको परिवारमाथि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले गरेको ज्यादती निकै पीडादायी छ । त्यो दिनको कहालीलाग्दो घटना दर्दनाक छ ।
‘कति सुनाउनु ! हरेक वर्ष तपाईंजस्तै पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी आउँछन्, जान्छन् । घाउ कोट्याउँछन् मात्रै । हुने केही होइन,’ शनिबार शाहीको घरमा पुगेका कान्तिपुर संवाददातासँग हर्कबहादुरकी बुहारी तुलसी शाहीले गुनासो गरिन्, ‘बिर्सिसकेको घटनालाई तपाईंहरूले सम्झाउने काम नगरिदिनूस् ।’
शाहीको घर नेपाल-भारत सीमा नजिकै छ । ०६७ फागुन ५ गते हर्कबहादुर घर नजिकैको भारतीय वनमा घाँसदाउरा गर्न गएका थिए । हाल पनि स्थानीयहरू घाँसदाउरा गर्न र गाईबाख्रा चराउन भारतीय वनमै जाने गर्छन् । यो पहिलेदेखिकै चलन हो । त्यसदिन घाँसदाउरा लिएर हर्कबहादुर घर फर्किंदै थिए । एक्कासी एसएसबी र भारतीय वन रक्षक टोलीसँग उनको जम्काभेट भयो । भारतीय सुरक्षाकर्मीले उनीमाथि सिकार गर्न आएको आरोप लगाए । उनले घाँसदाउरा मात्रै गर्न गएको जवाफ फर्काए । एसएसबीले उनको कुरा सुनेनन् । उनी भाग्दै नेपाली भूमि प्रवेश गरे । एसएसबीले घुँडामुनि गोली प्रहार गरे । गोली लागेर घाइते हर्कबहादुर रहरबारीमा लुक्न खोजे ।
‘भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालको भूमिमा प्रवेश गरेर ससुरालाई उठाएर लगे । उनीहरूले मोटरसाइकलमा लगेका थिए । त्यसयता उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ,’ बुहारी तुलसीले भनिन् । उनीसँगै घाँसदाउरा गर्न गएका स्थानीय भने भाग्न सफल भए । गाउँमा खबर फैलिएपछि गाउँले हर्कबहादुरलाई खोज्न गए तर फेला पार्न सकेनन् ।
घटनाबारे स्थानीय प्रशानसले पनि चासो राख्यो । उनको खोजीका लागि गाउँका अगुवाहरू काठमाडौंसम्म धाए । नेताहरूलाई भेटे । परराष्ट्र मन्त्रालय पुगे । गोली हानेर बेपत्ता पारिएका हर्कबहादुरको अवस्था अझैसम्म खुल्न सकेको छैन । हाल उनको खोजीको चर्चा पनि हुन छाडेको छ । ‘अब त आश पनि मरिसक्यो । फेरि आइहाल्नु हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ,’ हर्कबहादुरका नाति धीरजले भने ।
कान्तिपुर संवाददाता शाहीको घरमा पुग्दा उनीहरू आफन्तको मृत्युको पीडामा थिए । हर्कबहादुरकी पत्नी जुनकिरी, छोराहरू प्रेम, रूपसिंह र बलबहादुर मलामी गएका थिए । घरमा बुहारी र नातिमात्रै थिए ।
निकै प्रयास गर्दा पनि हर्कबहादुरको अवस्था सार्वजनिक गराउन नसकेको नेकपा बर्दियाका जिल्ला सदस्य कविराम परियारले बताए । बेपत्ता पारिएका हर्कबहादुरको खोजीका लागि उनीसहितको टोली काठमाडौंसम्म पुगेका थियो । ‘सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएन । होइन भने शाहीको अवस्था जे छ, त्यो खुल्थ्यो । नेपाली दूताबासले पनि खासै पहल गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘अवस्था सार्वजनिक नभएकै कारण परिवारका सदस्यले अरुसँग त्यस विषयमा कुरा गर्न चाहँदैनन् ।’ यसअघि एसएसबीकै जवानहरूले बढैयाताल-२, सीतापुर गाउँका स्थानीयसँग विवाद हुँदा नगेन्द्र बिसीको घुम्ती पसलमा आगजनी गरेका थिए ।
गुलरिया नगरपालिका_८, आशापुरका राममिलन लोधलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता बनाएको आठ वर्ष बितिसक्यो । उनी पनि घाँसदाउराका लागि भारतीय क्षेत्रमा पर्ने समय माता मन्दिरको घना जंगलमा गएका थिए । भारतीय वन रक्षकले सिकारीको अशंकामा गोली चलाउँदा लोध गम्भीर घाइते भए । उनलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले मोटरसाइकलमा राखेर लगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
उनीसँगै भारतीय वन पुगेका राधेश्याम पनि गोली लागेर घाइते भएका थिए । गोली प्रहार गर्ने मुर्तिहास्थित वन विभागका वन रक्षक भएको उनले बताए । सागर लोध, अमृतलाल लोधलगायतले ज्यान जोगाउन सफल भए । ‘घर आउने आश मर्दै गए पनि प्रतिक्षामै छु,’ लोध पत्नी पार्वती लोधले भनिन् । भारतीय अधिकारीले श्रीमान्‌बारे कुनै जानकारी नदिएको उनले बताइन् । एसएसबीले नागरिकता लगायतको प्रतिलिपि लगेका थिए । गोली प्रहारपछि घटनास्थलमा रगत बगेको स्थानीयले देखेका थिए । वनरक्षकले उनलाई उपचारका लागि भारत उत्तरप्रदेश राज्यस्थित बहराइच लगेको जानकारी स्थानीयलाई दिए पनि हालसम्म पनि उनको अवस्था अज्ञात छ ।
लोधका आफन्तले घटनालगत्तै बहराइचस्थित सरकारी तथा निजी अस्पतालमा खोजतलास गरेका थिए । स्थानीय प्रशासनले पनि खोजीका लागि आग्रह गरे । लोधकी श्रीमती, एक छोरी र दुई छोरा छन् । भारतीय जंगलमा घाँसदाउरा र चरिचरन गर्न सीमावर्तीका स्थानीय पुग्छन् । त्यसवापत वनरक्षकलाई कर (तिहाइ)बापत धान, गहुँ र तोरी दिने गरेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ १८:४०